‘साथि सँग मनका कुरा’का रसिक भन्छन् “रेडियो नै प्यारो” – Himal FM 90.2 MHz
‘साथि सँग मनका कुरा’का रसिक भन्छन् “रेडियो नै प्यारो”
कला र साहित्य पूर्वका खबर adminhimal November 28, 2018
रेडियो कसैको लागी सोखको बिषय हो भने कतिको लागी लक्ष/उद्धेश्य सबै । तर जे जसरी रेडियो जगतमा प्रबेश गर्छ, उँ त्यहाँबाट फुत्किन सक्दैन । रेडियो जिन्दगी हो भबिष्य हो । अझै राष्ट्रिय स्तरका रेडियोमा काम गर्नू सबैको सोख र सपनाको बिषय हो । यस्तै राष्ट्रिय स्तरको रेडियोबाट आफ्नो पहिचान बनाउन सफल युवा मध्ये एक हुन, उदयपुरका रसिक रुचाल ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको बगाहमा जन्मिएका रसिक हाल युवाहरुको मनमुटुमा बस्न सफल रेडियो कार्यक्रम साथि सँग मनका कुरा मा छन् । सानै देखी रेडियोमा काम गर्ने सोख रहेका उनले उदयपुरका स्थानिय रेडियोहरु ‘रेडियो त्रियुगा, रेडियो उदयपुर लगायतमा काम गरिसकेका छन् । रुचालले साथि सँग कनका कुरा कार्यक्रम संचालन गर्न थालेको २ बर्ष बितिसकेको छ । तिनै प्रतिवाभान युवा रसिक रुचाल सँग हिमाल एफ.एम.का प्रस्तोता राकेश नेपालीले गर्नुभएको कुराकानीको सार यस्तो छ ।
हिजो आज रेडियो कार्यक्रम साथी सग मनका कुरामा ब्यस्त छु ।
यो ठाउँ सम्म कसरि पुग्नुभयो ?
रेडियो प्रतिको रुचि र कामले नै यो ठाऊमा पुगे ।
तपाई बाल्यकाललाई कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ ?
पाए भने फेरी त्यो दिनमा जान चाहान्छु । खोला,जंगल, पाखा, पखेरा, भिर, गाई गोठालो जादा कत्ति डुलेका थियौ मलाई त्यो ठाऊ स्वर्ग लाग्थ्यो । घास काट्ने, चुङ्गी,छुर, डन्डीवियो,किला मारी चोर पुलिस कत्ति खेलेको थियौ, अनि गोठालो जादा फिलिमको सुटिङ गरेको अझै याद आउछ, त्यो त अब सपनाको संसार भयो । ति छुच्चा दिनहरु कहिले फर्केर आउने छैनन् । त्यो मेरो स्वर्ण युगा थियो ।
काम गर्दाको रमाईलो र अबिस्मरणिय पल छन् ?
काम गर्दाको रमाईलो साथी सग मनका कुराको टिम र ति पुराना दिनहरु सबै अबिस्मरणिय पल हुन ।
तपाईको खास उद्धेश्य र लक्ष्य के छ ?
संसार भरिका युवा सँग काम गर्ने ।
श्रोताको माया कत्तिको पाउनु भएको छ ?
श्रोताकाृ मायाले त काम गर्ने प्रत्साहान मिल्छ ।
पत्रकारीता र रेडियोकर्मिको जिवन कत्तिको सहज र चुनौतीपूर्ण छ ?
एक हिसाबले चुनौतिपूण र एक हिसाबले सहज दुबै छन् । प्रविधिले कोल्टे फेरे पछि धेरै प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
कार्यक्रमको तयारी कसरी गर्नुहुन्छ ?
टिममा छलफल गरेर ।
केटिहरु कत्तिको पछि लाग्छन् ?
यो उमेर नै यस्तै हो । अघि हिड्दा पछि हुन्छन् । पछि हिड्दा अघि ।
नभै नहुने चिज हो । यसले मान्छे लाई धेरै माथि पनि पु¥याउछ र निकै तल पनि खसाउछ । तर पनि आवश्यक छ ।
गर्लफ्रेन्ड त छन् होला नी ।
म सबैको साथी हो । त्यसैले वोइफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड सबै छन् ।
स्वस्थ्य रहनुस व्यस्त रहनुस अनि मुस्कुराई रहनुस ।